သာကေတက လူမိုက်ကြီးတစ်ဦး အကြောင်း - Thadin
[ April 21, 2019 ] အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ ငွေရှာရုံနဲ့ တာဝန်ကျေပြီမထင်ပါနဲ့….စကားတစ်ခွန်းက လက်ဆောင်တစ်ခုထက် ပိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်…! KNOWLEDGE
[ April 21, 2019 ] ညစ်ပတ်နေတဲ့ ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးကို အလွယ်ကူဆုံးသန့်ရှင်းနည်း…! HEALTHY
HomeLIFESTYLEသာကေတက လူမိုက်ကြီးတစ်ဦး အကြောင်း
သာကေတက လူမိုက်ကြီးတစ်ဦး အကြောင်း
January 31, 2019 Admin Kwee LIFESTYLE Comments Off on သာကေတက လူမိုက်ကြီးတစ်ဦး အကြောင်း
လူထုခေါင်းဆောင်အတွက်အရိုးကြေကြေ အရေခန်းခန်းအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ် သွားမယ် ဆိုတဲ့ သာကေတက နှလုံးလှ လူမိုက်ကြီးဦးစိုးဝင်း။
တက်သစ်စအစိုးရလက်ထက်မှာ သက်တော်စောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပူပူနွေးနွေး သက်တော်စောင့်မလေး ချယ်ရီထက်ကို လူသိများပေမဲ့.. နှစ်ပေါင်းများစွာလူထု ခေါင်းဆောင်ကို ထီးလိုမိုးအရိပ်သဖွယ် ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ ဦးစိုးဝင်းအကြောင်းကတော့လူသိနည်းလှ ပါတယ်။သူလိုလူရဲ့ရှားရှားပါးပါးစိတ်ဓာတ် ကိုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။
ဦးစိုးဝင်း တာဝန်ကျေလိုက်ပုံကတော့ တော်လှန်ရေးပြန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရဦးတင် ဦးတောင် အံ့သြယူရတယ် အမေစုအပြင်ကပြန်လာပြီး ကိုစိုးဝင်းကျမ ၁၅မိနစ်အချိန်ရတယ်.. ခဏနားဦးမယ်ဆိုပြီး ခဏအနားယူနေချိန်မှာအဘဦးတင်ဦး ရောက်လာပြီး ခဏလောက် တွေ့ချင်တာကိုအတွေ့မခံ။ အိမ်လှေကားဝကနေအတက်မခံ။အမေစု အနားယူချိန် ၁၅ မိနစ်ပဲရှိလို့နားပါစေတဲ့ အတွေ့မခံလို့ ဦးတင်ဦး စိတ်ဆိုးပြန်သွားတယ်။ ခဏကြာ အဘဦးတင်ဦး ကျနော်စိတ်လောသွားလို့ပါကိုစိုးဝင်းလို့ ပြောပြီးတောင်းပန်ယူရပါသတဲ့။
ဦးရွှေမန်းနဲ့တွေ့တော့လည်းဦးရွှေမန်း psoကသူ့ကို အပြင်ထွက်ခိုင်းတော့ မင်းလည်း ဦးရွှေမန်းpso ငါလည်းအမေစု ကိုယ်ရံတော် ထွက်ခြင်းထွက်နှစ်ယောက်စလုံးအခန်း အပြင်ထွက်မှထွက်မယ် လို့ခပ်တင်းတင်း ပြန်ပြောလို့ ဦးရွှေမန်းကရီပြီးသူ့psoကိုနေပါစေ မထွက်ခိုင်းပါနဲ့တဲ့ အမေစုအတွက်ဆို အသက်ကိုပေးဆပ်ဖို့ဝင်မလေးသူ.. သာကေတသား.. နှလုံးလှလူမိုက်ကြီးဦးစိုးဝင်း အမတ်တနေရာရွေးခိုင်းတော့လည်းမယူ..
မိသားစုပါနေဖို့နေပြည်တော်က အမေစုရဲ့ အိမ်ဝင်းလုံခြုံရေးအတွက်သီးသန့် နေဖို့အဆောက်အဦပေးတော့လည်းလက် မခံ…ပါဘူးတဲ့။ နိင်ငံခြားသွားရင် ဝတ်ဖို့ဘောင်းဘီပေးတော့လည်းမဝတ် အဆောင်အယောင်ပေးခဲ့ရင် သူ့ကိုအမေစုက အနားမှာမနေစေချင်လို့ သူ့ကိုနှင်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုလို့ ဘာမှမပေးရဲတဲ့ သာကေတသား…နှလုံးလှလူမိုက်ကြီး ဦးစိုးဝင်း။
Credit Nay Lin Nay Lin
လူထုခေါငျးဆောငျအတှကျအရိုးကွကွေေ အရခေနျးခနျးအသကျနဲ့လဲပွီးကာကှယျ သှားမယျ ဆိုတဲ့ သာကတေက နှလုံးလှ လူမိုကျကွီးဦးစိုးဝငျး။
တကျသဈစအစိုးရလကျထကျမှာ သကျတျောစောငျ့ဖွဈလာတဲ့ပူပူနှေးနှေး သကျတျောစောငျ့မလေး ခယျြရီထကျကို လူသိမြားပမေဲ့.. နှဈပေါငျးမြားစှာလူထု ခေါငျးဆောငျကို ထီးလိုမိုးအရိပျသဖှယျ ကာကှယျပေးခဲ့တဲ့ ဦးစိုးဝငျးအကွောငျးကတော့လူသိနညျးလှ ပါတယျ။သူလိုလူရဲ့ရှားရှားပါးပါးစိတျဓာတျ ကိုမှတျတမျးတငျလိုကျပါတယျ။
ဦးစိုးဝငျး တာဝနျကလြေိုကျပုံကတော့ တျောလှနျရေးပွနျ ဗိုလျခြုပျကွီးသူရဦးတငျ ဦးတောငျ အံ့သွယူရတယျ အမစေုအပွငျကပွနျလာပွီး ကိုစိုးဝငျးကမြ ၁၅မိနဈအခြိနျရတယျ.. ခဏနားဦးမယျဆိုပွီး ခဏအနားယူနခြေိနျမှာအဘဦးတငျဦး ရောကျလာပွီး ခဏလောကျ တှခေ့ငျြတာကိုအတှမေ့ခံ။ အိမျလှကေားဝကနအေတကျမခံ။အမစေု အနားယူခြိနျ ၁၅ မိနဈပဲရှိလို့နားပါစတေဲ့ အတှမေ့ခံလို့ ဦးတငျဦး စိတျဆိုးပွနျသှားတယျ။ ခဏကွာ အဘဦးတငျဦး ကနြျောစိတျလောသှားလို့ပါကိုစိုးဝငျးလို့ ပွောပွီးတောငျးပနျယူရပါသတဲ့။
ဦးရှမေနျးနဲ့တှတေ့ော့လညျးဦးရှမေနျး psoကသူ့ကို အပွငျထှကျခိုငျးတော့ မငျးလညျး ဦးရှမေနျးpso ငါလညျးအမစေု ကိုယျရံတျော ထှကျခွငျးထှကျနှဈယောကျစလုံးအခနျး အပွငျထှကျမှထှကျမယျ လို့ခပျတငျးတငျး ပွနျပွောလို့ ဦးရှမေနျးကရီပွီးသူ့psoကိုနပေါစေ မထှကျခိုငျးပါနဲ့တဲ့ အမစေုအတှကျဆို အသကျကိုပေးဆပျဖို့ဝငျမလေးသူ.. သာကတေသား.. နှလုံးလှ
လူမိုကျကွီးဦးစိုးဝငျး အမတျတနရောရှေးခိုငျးတော့လညျးမယူ.. မိသားစုပါနဖေို့နပွေညျတျောက အမစေုရဲ့ အိမျဝငျးလုံခွုံရေးအတှကျသီးသနျ့ နဖေို့အဆောကျအဦပေးတော့လညျးလကျ မခံ…ပါဘူးတဲ့။ နိငျငံခွားသှားရငျ ဝတျဖို့ဘောငျးဘီပေးတော့လညျးမဝတျ အဆောငျအယောငျပေးခဲ့ရငျ သူ့ကိုအမစေုက အနားမှာမနစေခေငျြလို့ သူ့ကိုနှငျလိုကျတာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုလို့ ဘာမှမပေးရဲတဲ့ သာကတေသား…နှလုံးလှလူမိုကျကွီး ဦးစိုးဝငျး။
ဘုရားသမိုင်း ရှင်းပြရင်း ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေခဲ့ရတဲ့ သနားစရာကလေးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀
လူ့အသက်ပေါင်းများစွာတို့ကို ကယ်တင်ပေးနိုင်သည့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအတွက် ဆေးနည်း…!
Users Today : 1633
This Month : 35498
This Year : 176955
Total Users : 535979
Views Today : 6666
Total views : 2424223